India na-eme nnwale COVID-19, ịpụ iche maka ndị Britain niile
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » India na -agbasa ozi ọma » India na-eme nnwale COVID-19, ịpụ iche maka ndị Britain niile
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • India na -agbasa ozi ọma • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ UK na -agbasa
Ọ dị ka a ga -ewebata ihe ọhụrụ a maka nzaghachi usoro yiri nke United Kingdom machibidoro ụmụ amaala India.
India kpọrọ mkpebi Britain ịghara ịmata ụdị ọgwụ mgbochi AstraZeneca nke India, nke a maara dị ka Covishield, "ịkpa oke".
Ndị amaala UK gbara ọgwụ mgbochi ọrịa bịarutere India ga-edobe ya iche maka ụbọchị iri.
Malite na Mọnde, ndị niile bịarutere UK ga-eweta ule COVID-19 na-adịghị mma were awa 72 tupu ọpụpụ.
N'ihe pụtara ìhè, ndị ọrụ Mịnịsta Ofesi nke India kwupụtara taa na ụmụ amaala UK niile, gụnyere ndị nwere ọgwụ mgbochi zuru oke, ga-anọpụ iche maka ụbọchị iri mgbe ha rutere India.
Ihe ọhụrụ a chọrọ ka ewebata ya na nzaghachi yiri ya usoro nke UK amachibidoro ụmụ amaala India.
Nkwuputa amụma ọhụrụ a na -abịa mgbe onye odeakwụkwọ mba ofesi India Harsh Vardhan Shringla kpọrọ mkpebi Britain ịghara ịmata ụdị nke India. AstraZeneca Ọgwụ mgbochi ọrịa, nke a maara dị ka Covishield, "ịkpa oke".
Onye ozi ahụ adọla aka na ntị maka mmeghachi omume ma ọ bụrụ na London ajụ ịtụgharị uche.
Malite na Mọnde, ndị Britain niile bịarutere-n'agbanyeghị ọnọdụ ịgba ọgwụ mgbochi ha-ga-eweta ule COVID-19 na-adịghị mma were awa 72 tupu ọpụpụ, mee nnwale nke abụọ na mbata na ụbọchị nke atọ ka e mesịrị.
A ga -etinyerịrị oge ịpụ iche maka ụbọchị iri, ka onye ọrụ ozi ala ọzọ kwuru.
Gọọmentị Britain kwupụtara n'ọnwa gara aga na ọ ga -ekwe ka ndị njem ọgwụ mgbochi zuru oke wụpụ iche iche wee were ule ole na ole, mana naanị ịgba ọgwụ mgbochi amata n'okpuru mmemme America, Britain ma ọ bụ Europe ma ọ bụ ndị otu ahụike kwadoro.
Ihe karịrị mba iri na abụọ na Eshia, Caribbean na Middle East mere ya na ndepụta, mana IndiaAgụnyeghị mmemme ya. Ọzọkwa, anabataghị mmemme Africa ọ bụla.
Imirikiti ndị India ejirila ọgwụ ndị India nyere ọgwụ mgbochi AstraZeneca gbaa, nke Serum Institute of India mepụtara. Ndị ọzọ enwetala ọgwụ mgbochi COVAXIN nke ụlọ ọrụ India mepụtara nke anaghị eji na Britain.
Ọjụjụ Britain jụrụ ịnara asambodo ọgwụ mgbochi ụfọdụ ebutela nchegbu na ọ nwere ike ịka njọ na -egbu oge ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa.
Mba ndị natara ọtụtụ narị puku ọgwụ mgbochi AstraZeneca n'aka gọọmentị Britain hapụrụ na -eche ihe kpatara mmemme ịgba ọgwụ mgbochi ha adịghị mma n'anya onye na -eweta ya.